कालापानी क्षेत्रबाट ९८ प्रतिशत सूर्य ढाकिएको ग्रहण देखिने : कुन राशिले हेर्न हुन्छ, कुनले हुँदैन ? – Sandesh Munch
कालापानी क्षेत्रबाट ९८ प्रतिशत सूर्य ढाकिएको ग्रहण देखिने : कुन राशिले हेर्न हुन्छ, कुनले हुँदैन ?
June 20, 2020 136
काठमाडौं : यही असार ७ गते आइतबार आषाढ कृष्ण औँसीका दिन लाग्ने सूर्यग्रहण हालै नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट ९८ प्रतिशतसम्म सूर्य ढाकिएको देखिने छ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रबाट नेपालमै सबैभन्दा धेरै ९८ प्रतिशतसम्म सूर्य ढाकिएको देखिने वरिष्ठ खगोलविद् एवं वाल्मीक विद्यापीठ ज्योतिष विषयका सहप्राध्यापक जयन्त आचार्यले जानकारी दिए। काठमाडौँबाट भने ८८ प्रतिशतसम्म सूर्य ढाक्ने छ।
यो ग्रहण वलय (पुरै सूर्य ढाक्ने) सूर्यग्रहण भए पनि नेपालबाट खण्डग्रास (आधा ढाक्ने) मात्र देख्न सकिने छ। ग्रहण कङ्गो, इथियोपिया, दक्षिणी सुडान, मस्कट, यमन, ओमान, पाकिस्तानको दक्षिणी भाग, भारतको देहरादुन, कुरुक्षेत्र, चीनको तिब्बत, आदि ठाउँबाट वलय सूर्यग्रहण देख्न सकिने उनले सुनाए।
चन्द्रग्रहण हेर्दा आँखामा कुनै असर गर्दैन भने पनि सूर्यग्रहण हेर्दा अत्यन्तै सावधानी अपनाउनुपर्छ। मानिसको आँखा अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ। आँखाभित्रको रेटिनामा सूर्यबाट आएको प्रकाश परेमा रेटिनाको एउटा भाग स्थायी रुपमा नै नष्ट हुन गई मानिस सदाका लागि अन्धोसमेत हुन सक्छ। सूर्यग्रहण नाङ्गो आँखाले कहिले पनि हेर्नु हँदैन। सूर्यग्रहण हेर्दा अत्यन्त सावधानी अपनाउनु पर्छ।
ग्रहण हेर्न बनाइएको बिशेष चस्माको प्रयोग गरी ग्रहण हेरेमा कुनै नोक्सानी हुन्न। सूर्यग्रहण हेर्ने अत्यन्त सुरक्षित तरिका सूर्यविम्बको प्रतिविम्ब बनाई छाया हेर्नु नै हो। ग्रहणका बेला दान दक्षिण गर्दा विशेष फल मिल्ने धार्मिक विश्वास रहेको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले बताए। नदी तट वा गङ्गामा गई ग्रहणको स्नान गरी शुद्घ हुने गर्दछन्।
तान्त्रिकहरु मन्त्र सिद्घ गराउनका निमित्त ग्रहण लागेको समयलाई उपयुक्त मान्छन्। यसैले ग्रहणका समयमा मन्त्रको साधना समेत गर्दछन्। ग्रहणसम्बन्धी अन्धविश्वास संसारभरी नै रहेको पाउन सकिन्छ। रोमनहरु ग्रहणका बेला चिच्याउने गर्दछन् भने चीनमा ग्रहण र ड्र्यागन सँगको सम्बन्धमा विश्वास गर्दछन्। प्राचीन मिश्रका राजा आफैँ सूर्यवंशी थिए। सूर्यग्रहणका बेलामा उनी शहरको मुख्य मन्दिरमा परिक्रमा गरिरहन्थे भन्ने इतिहास भेटिन्छ।
सूर्यग्रहण नेपालमा बिहान १०:५५ देखि शुरु भई अपराह्न २:२४ बजे समाप्त हुने छ। मध्याह्न १२:०४ बजे सूर्यलाई करीव ८८ प्रतिशत ढाकेको देखिने छ। ग्रहणका समयमा वातावरणीय तापक्रम घटेर चिसो अनुभव हुनेछ। त्यसदिन दुईपटक बिहान भएको पो हि कि भन्ने जस्तो महशुस हुने खगोलविद् आचार्यले बताए।
धर्मशास्त्रअनुसार सूर्यग्रहण मेष, सिंह, कन्या एवं मकर राशि भएका मानिसले मात्र हेर्न हुने समितिका सदस्य सचिव तथा पञ्चाङ्गकार सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले बताए। वैज्ञानिक मतमा भने सूर्यग्रहण जो सुकैले सुरक्षित तरिका अपनाएर हेर्न हुने नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराई बताउँछन्।
साधारण मानिसका लागि ग्रहण एउटा अनौठो तथा असाधारण घटना हो। खगोलविद्का लागि यस्तो घटना आफ्नो गणित जाँच्ने सुनौलो अवसर हो। वैज्ञानिक तथा खगोलविद् सूर्य, चन्द्र तथा पृथ्वीको सही दूरी मापन गर्न ग्रहणको उपयोग गर्दछन्। साना बालबालिकाका लागि विज्ञानमा रुचि पैदा गराउन यस्ता घटना उपयोगी हुन्छन्। नेपालबाट करिब ४४ वर्षपछि मात्र यस्तै अर्को सूर्यग्रहण देखिन्छ।
कहाँबाट हेर्न सकिन्छ सूर्यग्रहण
सूर्यग्रहण हेर्न चाहनेलाई तक्षशिला एष्ट्रोनोमिकल क्लबले सामाखुसीस्थित कलेजको छतबाट निःशुल्क तथा सुरक्षित तरिकाबाट भौतिक दूरी कायम गरी हेर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। यसैगरी नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले बत्तीसपुतलीस्थित कार्यालयबाट युट्युब च्यानलमार्फत् सूर्यग्रहणको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ।
शनिबार साँझ ७:०० बजे सूर्यग्रहण विषयमा जिज्ञासा हुनेले सोसाइटीका विज्ञसँग प्रश्न राख्न सक्ने अध्यक्ष भट्टराईले बताए। सूर्यग्रहणका विषयमा जिज्ञासा हुनेले शनिबार साँझ सोसाइटीको प्रत्यक्ष सामाजिक सञ्जाल पेजमार्फत् प्रत्यक्ष प्रसारणका बेला प्रश्न राख्न सक्ने छन्। प्रश्न ‘आस्क नासो हस्टेज’मा राखेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्न सकिने सोसाइटीले जनाएको छ।
Prevअमेरिकामा एकै दिन ३३ हजारभन्दा बढीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण
Nextकतारमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या हालसम्मकै उच्च
उपत्यकामा जोरविजोर लागू, सार्वजनिक यातायात पनि चल्ने
ती पाँच प्रकारका व्यक्ति, जसको घरमा लक्ष्मी माताको बास कदापि हुदैन !
३ बर्षदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा
पाहुना आएकी बालिकामा कोरोना देखिएपछि कैलालीको भजनीमा त्रास
आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने (84036)
दुखद समाचार ! आखिर किन गरे त पारसले आत्मा हत्या ? (27629)
अत्यन्तै दु:खद खबर : भर्खरै कोरोनाको कारण दक्षिण अफ्रिकामा नवजात शिशुको मृ’त्यु ! RIP !!!! (13374)
भर्खरै कतारबाट आयो निक्कै ठुलो दुखको खबर, के भयो तेस्तो ? Watch Video (12575)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (12312)
खुशीको खबर ! अमेरिकाले निकालेको औषधीले बिरामी चट्ट निको भएको हुदा पुरा अमेरिका खुशीको सिमा छैन हेर्नुहोस (11968)
अमेरिकामा कोभिड-१९ को खोप वितरण गर्न सेना परिचालन गरिँदै (11471)
दुखद खबर! सुत्केरीको मृत्यु भएपछि धुलिखेल अस्पतालमा सतर्कता! (10224)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (9891)
फेरी नेपालमा आइसोलेशनमा राखिएका २२ बर्षीय युवकको मृ-त्यु (9668)
स्त्रीले बिहान उठेर यी काम गर्दा चम्किन्छ भाग्य
यी ५ उपाय अपाउनुहोस्, केही दिनमै बन्नुहुनेछ स्लिम
अब खुल्दैछ भाग्यको ढोका यि ४ राशि हुनेहरूको, हेर्नुहोस तपाई कुन राशि ?